အကြီးဆုံးသြစတြေးလျကုမ္ပဏီတွေကဘာတွေလဲ။ | Absolut ခရီးသွားခြင်း
လူးဝစ် Martinez | 20/04/2021 09:30 | အဆင့်မြှင့်တင် 20/04/2021 10:31 | ၾသစေတးလ်
အကြီးဆုံးသြစတြေးလျကုမ္ပဏီတွေကဘာတွေလဲ။ ဤမေးခွန်းသည်အထူးစီးပွားရေးဇုန်နယ်ပယ်ပြင်ပ၌ရှားပါးသည်။ သမုဒ္ဒရာတိုင်းပြည်သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အလွန်ဝေးကွာသောပုံရပြီးကျွန်ုပ်တို့အကြောင်းအနည်းငယ်သာသိရှိရခြင်းက၎င်းကိုလွှမ်းမိုးသည်။
သို့သော်၊ သြစတြေးလျ၌သင်ရှိသည်ဟုသင်သိသင့်သည် တစ် ဦး ချင်းငှားရမ်းခ ဂျာမနီ၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနှင့်ပြင်သစ်တို့ထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်။ ထို့အပြင်ကပြီးနောက်, ဒုတိယအဆင့် နော်ဝေထဲမှာ လူ့ဖွံ့ဖြိုးရေးညွှန်းကိန်း နှင့်၏ဆဌမနေရာ အသက်တာ၏အရည်အသွေးကို မဂ္ဂဇင်းကပြင်ဆင် 'စီးပွားရေးပညာရှင်'။ ဤအရာအားလုံးအတွက်၊ Australianစတြေးလျကုမ္ပဏီများသည်မည်သည့်ကုမ္ပဏီဖြစ်ကြောင်းသိထားခြင်းသည်ယနေ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကမ္ဘာ၌အရေးကြီးသည်။
1 အကြီးဆုံးသြစတြေးလျကုမ္ပဏီတွေကဘာတွေလဲ။ သတ္တုတွင်းမှဘဏ်လုပ်ငန်းသို့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအထိဖြစ်သည်
1.1 BHP ဘီလီယံ
1.4 Woolworths Group မှ
1.5 Westpac ဘဏ်လုပ်ငန်းကော်ပိုရေးရှင်း
1.7 Westfarmers, အကြီးဆုံးသြစတြေးလျကုမ္ပဏီများအကြားလက်လီအရောင်းဆိုင်
1.9 Transurban Group မှ
1.10 Amcor လီမိတက်သည်သြစတြေးလျတွင်အကြီးဆုံးကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်ထုပ်ပိုးထားသည်
အကြီးဆုံးသြစတြေးလျကုမ္ပဏီများသည်စီးပွားရေးကဏ္ different အသီးသီးတွင်သက်ဆိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းတို့အားလုံးသည်သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်များတွင်အင်အားကြီးမားစွာမျှဝေသုံးစွဲကြသည်။ ဒီကုမ္ပဏီတွေထဲကတချို့ကိုခင်ဗျားကိုပြမယ်။
ဒါဟာဖြစ်ပါသည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကြီးဆုံးသတ္တုတွင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင်ဗြိတိသျှတို့၏ပူးပေါင်းမှုမှမွေးဖွားခဲ့သည် ဘီလီယံခန့် နှင့်သြစတြေးလျ Broken Hill ပိုင်ရှင်။ ၎င်း၏ဌာနချုပ်၌ရှိကြ၏ Melbourneသို့သော်၎င်းတွင်သံ၊ စိန်၊ နီကယ်နှင့်ဘိုင်ဆိုဒ်စသည့်သတ္တုများကိုထုတ်ယူသည့်နိုင်ငံ ၂၅ နိုင်ငံတွင်ကိုယ်စားလှယ်များရှိသည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကဝင်ငွေကိုကြေငြာခဲ့သည် 46 ဘီလီယံခန့်မှန်းခြေအမြတ်ထက်ဝက်နည်းသောဒေါ်လာဘီလီယံ ၂၀ ခန့်ရှိသည်။
၎င်း၏အမည်မှသင်မြင်နိုင်သည်မှာ၎င်းသည်သမုဒ္ဒရာတိုင်းပြည်တွင်သာမကဒေသအတွင်းရှိအခြားဒေသများအားလုံး၌သာမကဘဏ်၏ဘဏ်လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အာရှတိုက် နှင့်ပင်၌တည်၏ အမေရိကန် y ဗြိတိန်နိုင်ငံ.
တိုင်းပြည်အတွင်းရှိအခြားအဓိကဘဏ်နှင့်ယှဉ်ပြိုင်ရန်ခက်ခဲသည် သြစတြေးလျနိုင်ငံသား, ဓနသဟာယအရင်းအနှီးအားဖြင့်ထက်ပိုကြီးတဲ့။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကဝင်ငွေကိုကြေငြာခဲ့သည် ဘီလီယံ ၃၀ သြစတြေးလျဒေါ်လာဆိုလိုသည်မှာခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၄၅ ဘီလီယံယူရိုဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်သြစတြေးလျားနိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးသောကုမ္ပဏီများအနက်မှဤကုမ္ပဏီအကြောင်းသင်အားပြောပြရန်သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းသို့ပြန်သွားပါသည်။ ၎င်း၏ဌာနချုပ်သည်လန်ဒန်တွင်ရှိနေဆဲဖြစ်သော်လည်းဗြိတိသျှတို့၏ပူးပေါင်းမှုမှမွေးဖွားခဲ့သည် Rio Tinto-Zinc ကော်ပိုရေးရှင်းစပိန်မှမိုင်းများနှင့်သြစတြေးလျ Conzinc Rio Tinto.
Es ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးကျောက်မီးသွေးတူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်က BHP Billion က ၀ ယ်ရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ သို့သော်စစ်ဆင်ရေးမပြီးသေးပါ။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်Río Tinto Group မှ ၀ င်ငွေနီးပါးကိုအစီရင်ခံခဲ့သည် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၅ ဘီလီယံ.
Woolworths Group မှ
၎င်းသည်ကုမ္ပဏီများ၏အမျိုးအစားခွဲခြားရာတွင်ပထမနေရာတွင်ရှိသည် ဇီဝနည်းပညာ။ ၎င်း၏ထုတ်လုပ်မှုAmongရိယာများထဲတွင်ယနေ့ခေတ်တွင်ဖြစ်ပွားနေသောကာကွယ်ဆေးများသာမကပလာစမာနှင့်အခြားဆဲလ်သစ်များပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခြင်းမှရရှိသောထုတ်ကုန်များလည်းပါဝင်သည်။ ၎င်းကို1916စတြေးလျအစိုးရမှ ၁၉၁၆ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သော်လည်း ၁၉၉၄ တွင်ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
၎င်းတွင် ၀ န်ထမ်း ၂၅၀၀၀ ခန့်ရှိပြီးပြီးခဲ့သည့်နှစ်က ၀ င်ငွေရရှိခဲ့သည် ဒေါ်လာ ၁၀ ဘီလီယံနီးပါး နီးပါးနှစ်ထောင်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိကြ၏သော။ ၎င်း၏ဈေးကွက်အရင်းအနှီးနှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်းမှာဒေါ်လာ ၁၄၅ ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိသည်။
ဒီစာရင်းထဲမှာသြစတြေးလျကအကြီးဆုံးကုမ္ပဏီတွေဖြစ်တဲ့တုန့်ပြန်မှုတစ်ခုကဘဏ်တစ်ခုထပ်ပေါ်လာပြန်ပါတယ်။ ၁၈၁၇ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်သည် အနောက်ပစိဖိတ် (Westpac ဟုအဓိပ္ပာယ်ရသော) သည်ရိုးရာအရရောစီးပွားဖြစ်ရောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဘဏ်လုပ်ငန်း၊ ဥစ္စာဓနစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာဘဏ်လုပ်ငန်းနှစ်ခုစလုံးအတွက်ရည်ရွယ်သည်။
အကိုင်းအခက်များလည်းရှိသည် နယူးဇီလန်။ စျေးကွက်၏အရင်းအနှီးနှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်းသည်သြစတြေးလျဒေါ်လာ ၉၀ ဘီလီယံနီးပါးရှိသည်။ သင့်ရဲ့စုစုပေါင်းဝင်ငွေ 90 ၌ရှိ၏ ၂၂ ဘီလီယံနီးပါး အမြတ်မှာbillionစတြေးလျဒေါ်လာလေးဘီလီယံခန့်ရှိသည်။ ၎င်း၏န်ထမ်းများအနက် 40 ခန့်ရှိပါတယ်။
ဤကုမ္ပဏီ၏လုပ်ဆောင်မှုသည်ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့်လည်းသက်ဆိုင်သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ။ ၎င်းသည်နိုင်ငံပေါင်း ၂၅ နိုင်ငံတွင် ၀ န်ထမ်း ၁၄ ထောင်ကျော်ရှိသည်။ ဟုတ်တယ် ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကြီးဆုံးအခြေခံအဆောက်အအုံပိုင်ဆိုင်မှုမန်နေဂျာဒီပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအစားအတွက်ဒေါ်လာ ၄၉၅ ဘီလီယံခန့်စီမံခန့်ခွဲသည်။
၎င်း၏ဈေးကွက်အရင်းအနှီးသည် ၅၃ ဘီလီယံနီးပါးရှိပြီး ၂၀၂၀ တွင်ကြေငြာခဲ့သည် ဒေါ်လာ ၃ ဘီလီယံအမြတ်အစွန်း။ ဤကုမ္ပဏီသည်အလွန်အင်အားကြီးမားပြီးသြစတြေးလျမီဒီယာက၎င်းကို“ Millionaire Factory” ဟုအမည်တပ်ခဲ့သည်။
အကယ်၍ ယခင်ကုမ္ပဏီများသည်သတ္တုတူးဖော်ရေး၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့်ကျန်းမာရေးပြdedicatedနာများအတွက်သာရည်ရွယ်ပါက၎င်းကိုလုပ်နိုင်သည် လက်လီရောင်းဝယ်မှု။ အထူးသဖြင့်၎င်းသည်ဓာတုပစ္စည်းနှင့်စက်မှုထုတ်ကုန်များ၊ မြေသြဇာများရောင်းချခြင်းနှင့်၎င်းသည် Coles အုပ်စုကို ၀ ယ်ယူခဲ့ခြင်းကြောင့်အစားအစာများကိုလည်းရောင်းချခဲ့သည်။
Coles Group စူပါမားကတ်, Westfarmers ၏လက်အောက်ခံ
လယ်သမားသမဝါယမအဖြစ် ၁၉၁၄ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးလက်ရှိတွင်လူတသိန်းကျော်အလုပ်ခန့်ထားသည်။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်စုစုပေါင်းဝင်ငွေရှိခဲ့သည် ဒေါ်လာ ၁၀ ဘီလီယံနီးပါးနှစ်ခုခန့်မှန်းခြေအမြတ်အစွန်းနှင့်အတူ။
သြစတြေးလျတွင်အကြီးဆုံးကုမ္ပဏီများစာရင်းမပါ ၀ င်နိုင်ပါ ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း။ အထူးသဖြင့်မိုဘိုင်းတယ်လီဖုန်း၊ အင်တာနက်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားဝန်ဆောင်မှုများကိုရောင်းချသည်။ ၎င်းသည်သမုဒ္ဒရာတိုင်းပြည်တွင်လည်ပတ်နေသူများထဲမှအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်ပြီးဒေါ်လာ ၄၅ ဘီလီယံနီးပါးရှိသောဈေးကွက်အရင်းအနှီးနှင့်အတူ။
2019 ခုနှစ်တွင်သူမအကြောင်းကို 26 န်ထမ်းများနှင့်၎င်း၏စုစုပေါင်းနှစ်စဉ်ဝင်ငွေရှိခဲ့ပါတယ် သူတို့ကဒေါ်လာ ၃၀ ဘီလီယံဝန်းကျင်ရှိတယ် နီးပါးလေး၏အသားတင်အမြတ်သည်။
Transurban Group မှ
millionစတြေးလျသည်စတုရန်းကီလိုမီတာ ၇ သန်းကျော်ရှိသည့်ကြီးမားသောနိုင်ငံဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုအပ်နှံတာကိုမအံ့သြပါဘူး အဝေးပြေးလမ်းမကြီးများတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်လည်ပတ်ခြင်း ၎င်းသည်နိုင်ငံအတွင်းအကြီးဆုံးဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် Transurban တွင်လည်းလည်ပတ်သည် ကနေဒါ y အမေရိကန်။ ၎င်း၏ဈေးကွက်အရင်းအနှီးသည်ဒေါ်လာ ၄၃ ဘီလီယံခန့်ရှိပြီး ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ လက်ရှိတွင် ၀ န်ထမ်း ၁၅၀၀ ခန့်နှင့်စုစုပေါင်း ၀ င်ငွေရှိသည်။ သူတို့ကဒေါ်လာ ၃၀ ဘီလီယံဝန်းကျင်ရှိတယ် တစ်ထောင်ပတ်ပတ်လည်အသားတင်အမြတ်အစွန်းနှင့်အတူ။
ဤကုမ္ပဏီသည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ရည်စူးသည်။ ၎င်းသည်နိုင်ငံပေါင်း ၄၀ တွင်ပါ ၀ င်သည် Espana၎င်းသည်စျေးကွက်တန်ဖိုးဒေါ်လာ ၂၇ ဘီလီယံနီးပါးရှိသည်။ ၎င်းတွင် ၀ န်ထမ်း ၃၅၀၀၀ ခန့်ရှိပြီးစုစုပေါင်း ၀ င်ငွေရှိသည် ဒေါ်လာ ၁၀ ဘီလီယံနီးပါးအသားတင်အမြတ်သည်သန်း ၁၅၀၀ ခန့်ရှိနေစဉ်။
နိဂုံးချုပ်လျှင်, သင်အံ့ were ခဲ့ကြပါ အကြီးဆုံးအကြီးမားဆုံးသြစတြေးလျကုမ္ပဏီများမှဖြစ်ကြသည်သငျသညျပြီးသားသူတို့သတ္တုတူးဖော်ရေး, ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဖြစ်ကဏ္sectorsများ, အခြေခံကျကျပိုင်ကြောင်းကိုမြင်ကြပြီ သို့သော်ထိုကဲ့သို့သောကဲ့သို့သောအခြားကြီးမားသောကုမ္ပဏီများ, CLS လီမိတက်, အဖြစ်သန့်ရှင်းထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်အတွက်စေ့စပ်သို့မဟုတ် Goodman အုပ်စုအိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်းလောကသို့။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Absolut ခရီးသွားခြင်း » အကြီးဆုံးသြစတြေးလျကုမ္ပဏီတွေကဘာတွေလဲ။